Fifindrana amin'ny rivotra :: Mety ho azo ao anatin’ny efitrano tery ny Covid-19 • AoRaha
Fifindrana amin’ny rivotra Mety ho azo ao anatin’ny efitrano tery ny Covid-19
Mila atao ambony hatrany ny fahamailoana manoloana ny fifindran’ny valanaretina Covid-19, na aiza na aiza. “Mety hifindra ao anatin’ny efitra tery avy amin’ny rivotra ny tsimok’aretina araka ny vokapikarohan’ny manam-pahaizana », hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialin’ny Ivontoeram-pibaikoana ny ady amin’ ny Covid-19 (CCO), omaly. Tena ao anatin’ny fiparitahan’ny tsimok’aretin’ny Covid-19 isika, ankehitriny. Misy foana ireo marary vaovao, ny sitrana, ary vao nahenoana olona matin’ny valanaretina indray, omaly.
Na izany aza, nahavelombolo ny filazan’ny profesora Vololontina Hanta Marie Danielle tamin’ireo tarehimarika nomeny fa betsaka lavitra noho ireo olona tsaboina ny isan’ny olona sitrana ankehitriny. Nahatratra telo amby telopolo sy roanjato ireo nahita fahombiazana tamin’ny fitsaboana, raha ny tatitra omaly.
Loza mihatra eto Analamanga sy Vakinankaratra ary Sava hatrany ny valanaretina. Iraika amby efapolo sy telonjato tamin’ ireo marary vaovao voatily miisa iraika amby enimpolo sy telonjato mitondra ny tsimok’ aretin’ny Covid-19 no teto Analamanga avokoa. Nahatiliana tranga vaovao enina ambin’ny9 folo tany Antsirabe ary iray tany Andapa.
Eo ihany koa ireo olona iraika amby efapolo marary mafy any amin’ireo toeram-pitsaboana isan-karazany. Mampirisika an’izay olona mahatsapa tena ho tsy salama ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle mba: “hanatona avy hatrany any amin’ireo toerana natokana hanaovana fitiliana satria efa betsaka izy ireo ankehitriny”.
Tafakatra efatra amby telopolo ireo matin’ny valanaretina teto Madagasikara, raha niampy an’ilay olona iray nindaosin’ny fahafatesana nampahafantarina, omaly. Nahavita nitily olona miisa efatra sy dimanjato sy fito arivo sy roa alina i Madagasikara, hatramin’izao.
Fivoaran’ny valanaretina :: Mihoatra amin’ny isan’ireo marary indray ny sitrana tamin’ny Covid-19
Fahafatesana tampoka :: Miaramila voatifitry ny basy teny an-tanany